Rajesh Koirala » Articles on women
नोबेल पुरस्कार पाउने महिलाको संख्या ४१ पुगेको छ । पोल्याण्डकी मेरी क्युरी सन् १९०३ मा भौतिकशास्त्र र सन् १९११ मा रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएर दुवै विषयमा पुरस्कृत हुने प्रथम महिला बनेकी थिइन् । Read More »
विभेदको छायामा महिला मृत्युदरमा कमी
विश्वले १ सय २१ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहेको बेला बेलायतको मेडिकल जर्नल ‘लान्सेट’ ले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वमा महिला विभेद व्यापक रहेको जनायो । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘साइप्रसका महिला धेरै बाँचेका छन् भने आइसल्यान्डका पुरुष । साइप्रसमा १ हजार महिलामध्ये ३८ जना मात्र ६० वर्ष नपुग्दै मर्छन् । यही तथ्यांकले यो राष्ट्र नम्बर एक हुन पुगेको हो । सन् १९७० मा साइप्रस १० औं स्थानमा थियो । दक्षिण कोरियाले साइप्रसलाई पछ्याएको छ । विश्वका अधिकांश ठाउँमा महिला मृत्युदरको तुलनामा पुरुष मृत्युदर निकै बढी छ ।’ अध्ययनमा जनगणना, मृत्युदर्ता एवं विभिन्न सर्वेक्षण समावेश गरिए। अध्ययन सन् १९७०, सन् १९९० र सन् २०१० गरिएको र चाँडै हुने मृत्युमा विशेष ध्यान दिइएको थियो । Read More »
राजनीतिमा महिलासम्बन्धी समाचारले उल्लेख्य स्थान पाएको वर्ष सन् २००९ महिला सांसद्को संख्यामा उतार-चढावको वर्ष नै रह्यो । त्यसका केही प्रमाणहरू अफ्रिकी मुलुक नै छन् ।
गत नोभेम्बर २७-२८ मा अफ्रिकी मुलुक नामिबियामा संसदीय निर्वाचन भयो तर त्यो निर्वाचन महिलाहरूका लागि आशावादी रहेन । अघिल्लो संसदमा ३० दशमलव ८ प्रतिशत महिला सदस्य रहेकोमा पछिल्लो निर्वाचनले केवल २५ प्रतिशत महिलालाई मात्र संसदमा पठाउन सक्यो । उता बोत्स्वानामा अक्टोबरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि महिला प्रतिनिधित्व ह्वात्तै घट्यो । पछिल्लो निर्वाचनमा ११ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि चुन्ने बोत्स्वानाका जनताले अक्टोबर निर्वाचनमा केवल ६ दशमलव ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि चयन गरे । यही परप्रेक्ष्यमा मलावीको समाचार भने केही सुखद् रह्यो । मे महिनामा त्यहाँ भएको निर्वाचनले २२ प्रतिशत महिला सांसद् चुन्यो जव कि अघिल्लो संसदमा त्यहाँ १४ प्रतिशत महिला सांसद् थिए । अफ्रिकाभर यस्तो आशा-निराशा रहे पनि दक्षिण अफ्रिकाको अप्रत्याशित छलाङलाई साधुवाद दिनैपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको ‘हाउस अफ एसेम्बली’ मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि रहेकोमा अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१५ सम्म अफ्रिकाका केही देशले संसदमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छन् । Read More »
सर्वाधिक धनीको सूचीमा महिला
विश्वका सर्वाधिक धनीको सूची सार्वजनिक हुँदा यसमा महिलाको स्थिति कस्तो रह्यो ? ‘फोर्ब्स’ पत्रिकाले यस्तो सूची बर्षेनी निकाल्दै आएको छ। यसपटकको सूचीमा अघिल्ला ११ स्थानमा पुरुष नै छन्।
‘फोर्ब्स’ को सूचीमा परेका महिलामध्ये सबैजसो आफूले कमाएर धनी भएको पाइँदैन । पिता वा श्रीमानको सम्पत्ति उनीहरूमा सरेको पाइन्छ। पुरुषको विवरण हेर्दा आफैं कमाएर धनी हुने प्रशस्त छन्। सूचीमा उल्लेख गरिएकामध्ये १ सय स्थानभित्र परेका महिला को-को हुन् ? उनीहरू कति सम्पत्ति भएर अर्बपति छन् ? कस्तो छ, उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि ?